အမေရိကန် ISM ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ PMI
အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာ ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအလွန်မြင့်မားနေပါသည်. အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်မှုကို တဖြည်းဖြည်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတာကြောင့် USDအတွက် အခြေအနေကောင်းများရှိနေသော်လည်း စစ်ရိပ်များ ကုန်သွယ်ရေးခြေအနေများကြောင့် ဈေးကွက်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုများကို ခံနေရပြန်ပါသည်. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ PMIဒေတာကို ထုတ်ကုန်စီမံဋ္ဌာနမှနေပြီး ဧပြီလ ၂ရက် ၁၇:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားဖို့ ရှိနေပါသည်. PMIဒေတာသည် အမေရိကန်စီးပွားရေးအခြေအနေအား သိရှိနိုင်သည့် အရေးပါသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒေတာမှာ 50.0 နှင့်အထက်ရှိပါက ဒေတာကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာအားကောင်းလာနိုင်ပါသည်. ထို့အပြင် စီးပွားရေးဒေတာများအားကောင်းပါက Fedအနေနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း အတိုးနှုန်း ၃ကြိမ်အထိ တင်နိုင်ခြေပါ များလာမှာဖြစ်ပါသည်. အကယ်၍ ခန့်မှန်းထားသည့်ပမာဏထက် အားပျော့သည့်ဒေတာထွက်လာပါက USDတန်ဖ်ိုး ခဏတာ ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်.